Iiplatifti ezi-4 eziBalaseleyo zokuRhweba ngeeNewbies - Funda iiRhwebo ezi-2
Iiplatifti ezi-4 eziBalaseleyo zokuRhweba ngeeNewbies
1 October 2019 | Ukuhlaziywa: 6 October 2019
AmaQonga amaNgcono eeNewbies kwiNtengiso ye-Forex
Kuyenzeka ukuba wenze ingeniso yesiqalo njengesiqalo kwimarike ye-forex, kodwa kuya kufuneka uhambe uthotho loqeqesho, oluhlala luthatha malunga neenyanga ezili-18. Ngelo xesha, kufuneka uqeqeshe ngokungaguquguqukiyo, ucebise kwaye usebenze.
Kuya kufuneka usebenzise iakhawunti yedemo ngaphambi kokuba uye kwiakhawunti ephilayo. Kuya kufuneka ukuba ufunde izinto ezahlukeneyo kwizengqondo zorhwebo kunye nenkqubo yokwenyani yokuthengisa ngokwayo.
Ukurhweba okuninzi kufuneka kwenziwe njenge-newbie kwimarike ye-forex, kodwa emva koko (kwakhona), ufuna elona qonga liphambili lokuthengisa ukuze wenze imisebenzi yakho. Kungenxa yoko le nto eli nqaku lichaza ezona ziqonga zibalaseleyo zokuthengisa zabaqalayo.
Amaqonga okurhweba ngaphambili e-newbies
IMeta Trader 4
Uninzi lweentengiso zebroker zentengiso zisebenzisa iqonga leMeta Trader 4. Kubalulekile ukuba wazi ukuba ufuna ukungena kwimali yokurhweba yokwenyani, emva koko ufuna iqonga le-MT4 ukuze ufunde iziseko zentengiso ye-forex.
Iqonga le-MT4 likuvumela ukuba uthengise bukhoma. Iqonga likwabonelela ngeempawu ezahlukileyo zabaqalayo ezinje ngokufunda ngokulula kwee-newbies ukuqonda izixhobo zemizobo kunye nemifanekiso, iwindow yesiphelo kunye neethebhu kunye nebha entsha yokufumana ulwazi lwamva nje, kunye nesinxibelelanisi somsebenzisi.
I-MT4 kufuneka ibe liqonga lokuqala ekufuneka ulisebenzise njengomqali, kwaye unokukhuphela usetyenziso lweselfowuni kwivenkile kaGoogle Play yeefowuni ze-android, kunye neVenkile yeApple yezixhobo ezisekwe kwi-iOS.
I-cTrader iveza ii-newbies kwimarike ye-forex kwiimeko zokurhweba ze-ECN. Iinkqubo zeSpotware zenze iqonga. Unokwenza iindawo ezininzi zokuphuma kwindawo ye-forex, kwaye ujonge ubunzima beemarike kwiincwadi zoku-odola.
cTrader isebenziseka lula; ungabeka ngokukhawuleza kwaye urhoxise imali yakho kwangoko. Iqonga line-desktop kunye nohlobo olusekwe kwiwebhu. Ikwanayo "ikopi yeTrader," evumela abaqalayo ukuba bakope imisebenzi yabarhwebi abadumileyo.
Ukurhweba ngeNtlalontle eToro
Elinye lamaqonga okurhweba aphambili kwi-forex kwiqonga leNtengiso yeNtlalo ye-eToro. Ifanelekile kubaqalayo abafuna ukuba ngumrhwebi olungileyo kwixa elizayo. Iqonga lichanekile ekusebenziseni, kwaye inendawo esekwe kwiwebhu ekhawulezayo ukulayisha ngaphandle kokulibazisa.
Emva koko, umrhwebi omtsha unethuba lokwenza uluhlu lokujonga kunye nokukopa ukuthengisa kubarhwebi abaphumeleleyo kwiqonga elinye. Xa ujonga umrhwebi ophumeleleyo eqongeni, kufuneka ujonge amanqaku oMngcipheko, eyona metric ibaluleke kakhulu ukuba uyiqaphele.
I-eToro yokurhweba ngokwasemngciphekweni wokubeka amanqaku emngciphekweni kunokuqwalaselwa njengenye yezona zinto zibalaseleyo phaya xa ukhetha iNkokeli. Kuya kufuneka usebenzise eliqonga ngexesha lokufunda kwakho kurhwebo lwe-forex.
IMeta Trader 5
IMT5 luphuculo lweqonga leMT4. Nangona kusekho imibuzo malunga nokuba kutheni iiMetaquotes zineMT4 kunye neMT5. Nangona i-MT5 iphucula ukuya kwi-MT4, ayifumananga kwimbalasane anayo i-MT4. Uninzi lwabarhwebi be-forex bazama ukwandisa ukungena kwemakethi ye-MT5 ngokunikezela kuphela nge-stock CFDs okanye i-cryptos.